Rakotomanga Eric: “Manahirana ny tsy fampiharan-dalàna amin’ny propagandy” | NewsMada
Rakotomanga Eric: “Manahirana ny tsy fampiharan-dalàna amin’ny propagandy”
Hatramin’izao, resabe ny momba ny tsy fanarahan-dalàna amin’izao fampielezan-kevitra fifidianana solombavambahoaka izao. “Manahirana ny tsy fampiharan-dalàna”, hoy Rakotomanga Eric.
“Amin’ny lafiny iray, efa fahazarana ela loatra izy io. Nefa efa nipetraka koa ny lalàna. Ny fomba hampiharana izay lalàna izay, angamba, no mbola tsy hitan’ny Ceni. Miteraka fahasorenana ihany ho an’ny olon-tsotra… Rahoviana izany no hampiharina ny lalàna efa napetraka? Izay ny tena manahirana.”
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny AKFM, Rakotomanga Eric, manoloana ny tsy fanarahan-dalàna amin’ny fampielezan-kevitra toy ny fametahana afisy, ohatra. Na efa manatsara ny fomba fiasany aza ny Ceni, mahagaga ny tsy mbola hahavitany ny zavatra toy ireny: tsy ampy olona na fitaovana ve sa mbola matahotra?
Notenenin’ny Ceni farany, ohatra, ny hoe: hosazina ireo rehetra mametraka petadrindrina amin’ny toerana tsy tokony hametrahana izany ka omena fe-potoana hanala ireny. Nefa tsy nisy tohiny izay. Misy manala ihany ny sasany: asa, na ny mpifaninana aminy no mandrovitra na izy tompony ny manala azy? Nefa ahoana ireny petadrindrina mbola hita eny rehetra ireny? Nankaiza àry ny tohin’ny hoe fampiharan-dalàna?
Amin’ny ankapobeny, tsy voaova ihany io zavatra io: misy ny lalàna nefa tsy ampiharina. Tsy amin’ny fametahana afisy ihany aza izay fa ny fanaovana fampielezan-kevitra amin’ny ankapobeny. Samy mbola afa-misintona ny dikan-teny na ny fandikana rahateo ny lalàna ny rehetra.
Samy manana ny fandikany lalàna…
“Lasa resabe ny amin’ny olom-panjakana miandany amina kandidà. Eo amin’ny fandikana ny dikan-tenin’ny lalàna no tena manahirana”, hoy izy. Milaza, ohatra, ny lalàna fa tsy mahazo manao fampielezan-kevitra ny olom-panjakana. Etsy andaniny, manomboka ny fanatanterahana ny Politika ankapoben’ny fanjakana (PGE) manerana an’i Madagasikara ny filohan’ny Repoblika. Azo sokajina hoe fampielezan-kevitra ve izany sa fanombohana ny asa nambarany tamin’ny vahoaka?
Raha ny fampielezan-kevitra ataon’ny tomponandraiki-panjakana toy ny filohan’ny Repoblika, ohatra: tokony hiteny izy amin’ireny hoe fidina ny kandidà apetrany. Nefa tsy nisy izany. Misy milaza hoe tsy fampielezan-kevitra mivantana ilay izy fa ankolaka. Izay no mahatonga ilay hoe dikan-teny amin’ny lalàna izany ka mbola azo ifamaliana. Tsy mbola voaporofo amin’ny lalàna hoe fampielezan-kevitra ireny…
“Tsy niteny ny filoha hoe hanao fitokanana ny kandidàny, ohatra, fa ny zava-misy: manaraka azy ny kandidà. Izy ve no niantso ny kandidà sa ireo no nanararaotra? Tsy hadisoan’ny filohan’ny Repoblika, ohatra, raha ny kandidà no nanararaotra… “, hoy ihany izy. Maharatsy laza ny kandidà izany, ary efa tonga saina ihany ny vahoaka… mahita. Ankasitrahan’ny maro anisa ny asan’ny filohan’ny Repoblika. Tsy midika izany hoe ankasitrahany koa ireo kandidà.